Ɔde Kɔmaa Filipifo 2:1-30
Kristofo ahobrɛase (1-4)
Kristo brɛɛ ne ho ase na wɔmaa no dibea kɛse (5-11)
Monyɛ mo ankasa nkwagye ho adwuma (12-18)
Monhyerɛn sɛ nkanea (15)
Ɔsomaa Timoteo ne Epafrodito (19-30)
2 Enti sɛ mowɔ Kristo mu nkuranhyɛ bi a, sɛ mubetumi de ɔdɔ akyekye nkurɔfo werɛ a, sɛ Kristo mu fekubɔ bi wɔ hɔ a, sɛ ayamhyehye ne mmɔborɔhunu bi wɔ hɔ a, 2 ɛnde munnya adwenkoro na monnodɔ mo ho, na monka mmom denneennen nyɛ baako,* na munkura adwene baako,+ na ama m’anigye adi mũ. 3 Mommfa mansotwe+ anaa ahomaso+ nnyɛ biribiara; mmom mommrɛ mo ho ase* na mummu afoforo sɛ wɔkyɛn mo.+ 4 Munnnwen mo nko ara mo ho,+ na mmom munnwen afoforo nso ho bi.+ 5 Momma adwene a na Kristo Yesu wɔ no bi ntena mo mu.+ 6 Ɛmfa ho sɛ na ɔne Onyankopɔn sɛ+ no, wannya adwene sɛ ɔbɛpere dibea na ɔne Onyankopɔn abɛyɛ pɛ.+ 7 Daabi. Mmom ɔpenee so maa biribiara fii ne nsa, na ɔfaa akoa tebea+ bɛyɛɛ onipa.*+ 8 Nea ɛsen saa koraa ne sɛ, bere a ɔbɛyɛɛ onipa* no, ɔbrɛɛ ne ho ase yɛɛ osetie kosii owu mu,+ asɛndua* so wu+ mu mpo. 9 Eyi nso nti na Onyankopɔn pagyaw no maa no dibea kɛse,+ na ɔdom maa no din a ɛkyɛn edin biara.+ 10 Enti Yesu din mu na ɛsɛ sɛ obiara bu nkotodwe kotow, wɔn a wɔwɔ soro ne wɔn a wɔwɔ asaase so ne wɔn a wɔwɔ asaase ase nyinaa,+ 11 na ɛsɛ sɛ tɛkrɛma nyinaa pae mu ka sɛ Yesu Kristo ne Awurade+ de hyɛ Agya Onyankopɔn anuonyam. 12 Enti m’adɔfo, sɛnea mewɔ hɔ a moyɛ osetie bere nyinaa, na sɛ minni hɔ mpo a moyɛ ma ɛsen saa no, monkɔ so mfa osuro ne ahopopo nyɛ mo ankasa nkwagye ho adwuma. 13 Na ɛyɛ Onyankopɔn na ɔkanyan mo sɛnea ɛsɔ n’ani, na ama moanya ɔpɛ no ne ahoɔden a mode bɛyɛ n’apɛde. 14 Biribiara a mobɛyɛ no, mommma anwiinwii+ ne akyinnyegye mmma mu,+ 15 na moayɛ nnipa a wɔn ho nni asɛm na wɔyɛ kronn, Onyankopɔn mma+ a dɛm biara nni wɔn ho wɔ awo ntoatoaso a akɔntɔn na akyea+ mu a morehyerɛn wɔ wɔn mu sɛ nkanea wɔ wiase+ no. 16 Munso nkwa asɛm+ no mu denneennen na ama manya biribi agyina so adi ahurusi Kristo da no; ɛno bɛma mahu sɛ mantu mmirika hunu anaa mammrɛ angu. 17 Nanso sɛ wɔrehwie me sɛ nsã afɔre+ agu mo afɔre+ ne adwuma kronkron* a gyidi nti moreyɛ no so mpo a, ɛyɛ anigyesɛm ma me, na me ne mo nyinaa di ahurusi. 18 Mo nso momma mo ani nnye na mo ne me nni ahurusi. 19 M’ani da so sɛ, sɛ ɛyɛ Awurade Yesu pɛ a, mɛsoma Timoteo+ aba mo nkyɛn ntɛm, na sɛ mete mo nka a, ahyɛ me nkuran. 20 Na minni obiara a ne suban te sɛ ɔno a obeyi ne yam adi mo nsɛm ho dwuma saa. 21 Wɔn a aka nyinaa dwen wɔn ankasa ho; wonnwen Yesu Kristo ho. 22 Nanso munim sɛnea na ɔbɔ ne ho mmɔden. Ɔne me somee te sɛ abofra+ ne ne papa ma yɛtrɛw asɛmpa no mu. 23 Enti m’ani da so sɛ, minya hu me ho ano pɛ a, ɔno na mɛsoma no. 24 M’ankasa nso, sɛ Awurade ma kwan a, ɛrenkyɛ mɛba mo nkyɛn.+ 25 Nanso, seesei de, mihu sɛ ehia sɛ mesoma Epafrodito ba mo nkyɛn. Ɔyɛ me nua a me ne no yɛ adwuma ne me yɔnko sraani a mutuu no sɛ ɔmmɛsom me.+ 26 N’ani agyina mo nyinaa, na wabotow, efisɛ onim sɛ moate sɛ ɔyaree. 27 Ampa, ɔyaree ma anka ɔreyɛ awu, nanso Onyankopɔn huu no mmɔbɔ; ɛnyɛ ɔno nko, na mmom me nso, na awerɛhow ammene me. 28 Ne saa nti, meresoma no ntɛm aba mo nkyɛn, na sɛ muhu no a, moadi ahurusi bio na ama me nso m’adwinnwen so atew. 29 Enti momfa anigye kɛse nnye no sɛnea motaa yɛ ma Awurade akyidifo no; na monkɔ so mmu nnipa a wɔte saa no sɛ wɔsom bo,+ 30 efisɛ Kristo* adwuma nti, ɛkaa ketekete anka ɔrewu; ɔde ne nkwa* too ne nsam sɛnea ɛbɛyɛ a obesi mo ananmu asom me, efisɛ munni ha na moayɛ saa.+
^ Anaa “nyɛ baako wɔ ɔkra mu.”
^ Anaa “munnya ahobrɛase adwene.”
^ Nt., “bɛyɛɛ sɛ onipa dasani.”
^ Nt., “bere a ohui sɛ ne su ne ne yɛbea te sɛ onipa.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Awurade.”